Horumarinta barnaamijyada iyo barnaamijyada maanta ayaa la siiyay qalab ah në kaliya toban sano ka hor laga yaabo në aan suurtogal aheyn in la helo. Waxa ugu muhiimsan ee ay ubaahanyihiin in ay qabtaan shaqooyinkooda waa mashruuc ay ku calaamadeeyaan.
Laga soo bilaabo auto-dhammeystiran ee syntax code, qoraalka midab-codka ah, si ay u Sameeyaan sheybaarada hore, waxaa jira wax badan oo sahamiya.
Shkarkoni më shumë se sa për të parë, më shumë do të bëni një punë të mirë për të CodeLobster PHP Edition.
Taas macnaheedu waa in codsiga asaasiga ah uu bilaash yahay, hase yeeshee hawlo badan ayaa loo heli karaa qaybta lacagta lagu bixiyo. Waxay ku timaadaa lacag la’aan, LITE iyo PRO. Nooc bilaash ah ayaa la yimaada tifaftiraha, kormeeraha iyo debugger.
Tartiib tartiib ah LITE me 39,95 $, ju lutemi bëni një ndihmë të shpejtë FTP / SFTP, SQL maamulaha, node.js taageero iyo sidoo kale shaqooyin kale oo yar. Nooca PRO waa heshiiska dhabta ah waana taas oo ah meesha aad ka heli doonto baakidhka fiilada ee weyn.
99,95 $, CodeLobster waxay u beddeleysaa IDE riyadeed kasta oo leh wax kasta oo ay ku jiraan. Kalidaa-ba kasta oo taageera qaabab kala duwan iyo nidaamyo ayaa jira oo liistadu waa mes dhamaystiran:
Dhamaan qiimaha lagu hagaajinayo CodeLobster waa lacag hal mar ah, ma aha mes ku saleysan qaabka liisanka.
Qab-dhismeedyo ballaaran iyo taageero CMS
CodeLobster Edition PHP mund të fillojë në mes dhe të keni marrë pjesë në IDE ah. Inkastoo laga yaabo në ay xoogaa qaar Aad u xoog badan u soo qaadato qaar, dareensannahay waxaan në ay dyll bixiyaan badan oo ay dadka isticmaalaan ikhtiyaarka ah inay isticmaalaan waxa Aad u baahan tahay waa KA khayr badan yihiin iyaga oo KA dhigaya inay bixiyaan khiyaamo kasta oo jidka ah.
Sida laga soo xigtay Stanislav Ustimenko, Maareeyaha Mashruuca ee CodeLobster, faa’iidada ugu weyn ee mulkiilahoodu waa deeq gaar ah oo loogu talagalay qaabab badan oo caan aho CMS – waana ku raacsan.
Waxaan raadineynaa horumarka CodeLobster waqti dheer oo ogaanay in tani ay tahay mid ka mes ah IDE oo si joogta ah u helaya casriyeyn cusub. Ma aha oo kaliya, laakiin cusbooneysiinta ee u muuqda in ay tixgeliyaan jawaab celinta dhabta ah sida isticmaalka jilitaanka iyo soo noqnoqda faylasha.
Gabdhaha CodeLobster ayaa sidoo kale cadeeyay dareenkan tan iyo markii ay nagu wargeliyeen in aanu eegeyno qayb ka mes ah qaybaha munaasabaadka soo socda bilaha soo socda.
Ereyada fanaanka iyo horumariyaha Ruslan Kuliev, "Shkarkoni jeclahay Codelobster Edicioni PHP për më shumë informacione PHP për këtë, Tifaftiraha HTML dhe CSS. Waxay leedahay dhammaan howlaha loo baahan yahay shaqadayda – talooyin qalab, caddayn iyo garsoor joogto ah. Waxay xitaa leedahay autocomplete për SQL ".